Muhiimadda ay geeduhu u dhuuxaan | Cusbooneysiinta Cagaaran
ka ágeedaha muhiim ayey u yihiin nuugo CO2 iyo sunta wasakhaysa hawada aan neefsanayno.
Maanta awooda tacsida duurka sida soosaarayaasha oksijiin inta badan meerahana waa la xaalufiyey ama la dhaawacay hawdka, kaymaha iyo nidaamyada deegaanka oo leh dhir aad u tiro badan iyo dhir kale.
Bulshadeenna way u fududahay uguna dhakhso badan inay soo saaraan tiro aad u tiro badan CO2 Laakiin geedaha iyo nidaamyada deegaanka waxay ku adag yihiin inay dhuuqaan gaasas aad u tiro badan.
Celcelis ahaan geed cabirkiisu wanaagsan yahay ayaa nadiifin kara inta udhaxeysa 20 iyo 45 kg oo hawo ah 1 sano gudahood iyadoo kuxiran noocyada.
Hektar kasta oo kaymo ah waxay ka koobnaan kartaa qiyaastii 1000 geed, laakiin waa in lagu xisaabtamo in geeduhu ay qabtaan in ka badan CO2 markay korayaan markay dadka waaweyn gaadhayaan awooddoodu wax yar bay yaraaneysaa.
Qof kastaa wuxuu soo saaraa qiyaastii 3,9 tan oo ah CO2 sanadkiiba, sidaa darteed waxay qaadan doontaa in ka badan 9000 milyan oo hektar oo keymo ah si ay u awoodaan inay soo qabtaan tiradaas ah CO2.
Laakiin tan ka soo horjeedda ayaa dhacaya tan iyo malaayiin hektar oo ka mid ah keyn taagan meeraha sidaa darteed isku dheelitirka deegaanka runtii wuu kacsan yahay. Isku dheelitirnaanta waa mid xun maxaa yeelay wax badan oo CO2 ah ayaa la sii daayaa waxyar oo CO2 ahna waa la nuugaa.
Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo kaymaha iyo hawdka maxaa yeelay geedaha iyo geedaha kala duwan ayaa si ka fiican uga wada shaqeeya shaqsi kasta.
La xaalufinta dhirta Waa inaad joojisaa oo aad bilawdaa dhireynta noocyada hooyo ee goobihii laga jaray kaymaha. Laakiin sidoo kale waa muhiim in la yareeyo raadkeena kaarboonka shaqsiyeed.
Ilaa hada, geeduhu waa habka ugu wax ku oolsan ee lagu nuugo wasakheynta, ma jiraan farsamooyin macmal ah oo lagu beddelo awooddan, marka waa inaan ka taxaddarno iyaga.
Ka sii xun ee hawada in aan hoos u neefsanno ayaa noqon doonta tayada nolosha in aan yeelan doono oo caafimaadka bini'aadamka ay inbadan saameyn ku yeelan doonto, waa inaanan ilaawin dhinacan.
XIGASHO: Dalxiis waara
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qabso co2 » Muhiimadda ay geeduhu u nuugaan
Gaaska ama safafka korontada